Olee otú Hichapụ Nchetara on iPhone
A na-echetara bụ ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-echeta ihe na ha mkpa na a na oge. A ọtụtụ ndị na-echefu banyere ihe ha na-eme atụmatụ na-eme ma ọ bụrụ na ha na-agaghị chetaara. Ihe agbanweela ugbu a na nkà na ụzụ ọhụrụ ndị mmadụ nwere ike chetaara na ihe na-eme, mgbe ime ma ọ bụ oge na-eme ma ọbụna ebe ime ya.
Ọ bụla ekwentị n'oge nwere a na-echetara ngwa wuru na ya. Nke a na-echetara ngwa na-akpan haziri maka ọrụ ka mfe icheta ihe ha zubere na-eme enweghị na-echefu banyere ya. Ihe ncheta ngwa na-emekarị na-akwado multiple ncheta na onye ọ bụla na-echetara nwere ya aha na oge.
The iPhone nwere ihe pụrụ iche na-echetara ngwa wuru na ya ka na-enyere ndị ọrụ na-esochi nke ihe ha kwesịrị ime na mgbe ọ chọrọ ka a mere. The iPhone ncheta ohere ọrụ ka ebe na-echetara ha ebe ihe omume na-ewere ọnọdụ. Ọ na-nwere na oti mkpu ma-ahapụ gị ịtọ mkpa nke ihe ị chọrọ ka e chetara banyere.
Hichapụ ncheta on iPhone ozugbo
Hichapụ ncheta on iPhone si iCloud
Ihichapụ kpam kpam iPhone ncheta na Wondershare SafeEraser
Mgbe ụfọdụ ọrụ chọrọ ka ihichapụ a na-echetara dị iche iche ihe. Ma eleghị anya, ihe omume ha chọrọ ka e chetara banyere e kagbuo ma ọ bụ ha dị nnọọ kpebiri ịgbanwe n'uche ha banyere ya. Wepụ ncheta on iPhone dị mfe na nzọụkwụ emetụta niile iOS ngwaọrụ.
Iji wepu ncheta na iPhone Nanị na-eso n'okpuru nyere nzọụkwụ. E nwere n'ezie 2 ụzọ na-aga banyere ya na ma ụzọ na-egosi n'okpuru. Onye ọ bụla nke ụzọ na-akọrọ ebe a, arụ ọrụ zuru okè ọ bụ ezie na nke abụọ usoro bụ nke ukwu ngwa ngwa.
Nzọụkwụ 1: Mepee Ncheta ngwa Site na Ihuenyo gị iPhone. Ị ga-ahụ a na ndepụta nke ihe ncheta na oge ị esiworo onye ọ bụla n'ime ha.
Nzọụkwụ 2: Pịa na Dezie na n'elu aka nri n'akụkụ aka nke ihuenyo. -Ahụ na foto dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, ị ga-enweta a ihuenyo dị ka onye na foto n'okpuru. Dị nnọọ enweta na-acha ọbara ọbara gburugburu na n'akụkụ nke na-echetara ị chọrọ ka ihichapụ.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, enweta na Nhichapụ ka ihichapụ ncheta.
Usoro a nke ihichapụ ncheta bụ ngwa ngwa karịa aga otu.
Nzọụkwụ 1: Mepee Ncheta ngwa Site na Ihuenyo gị iPhone.
Nzọụkwụ 2: swipe ncheta ị chọrọ ka ihichapụ n'aka ekpe gị n'akụkụ aka. Ị ga-ahụ ugbu a 2 nhọrọ "Ọzọ" na "Hichapụ" n'aka nri n'akụkụ nke ihuenyo. Enweta na Nhichapụ ka ihichapụ ncheta.
Hichapụ ncheta on iPhone si iCloud.
Ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume na-ekwurịta banyere iPhone ma ọ bụ ndị ọzọ iOS ngwaọrụ enweghị ekwu okwu banyere iCloud. iCloud bụ ihe online nchekwa nyere site Apple Company maka ya ọrụ na-enwe ike zọpụta ma na-echekwa ha data iji iOS ngwaọrụ. Ọ dị ka a ndabere maka iPhone ọrụ. Ọ na-ekwe ka ị na-azọpụta foto, vidiyo, ozi, kọntaktị, nchọgharị akụkọ ihe mere, ihe ncheta na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe i iCloud-arụ ọrụ, ọ na-emekarị syncs data gị iPhone online. Ị nwere ike họrọ ihe ị chọrọ iCloud ka mmekọrịta. Deactivating ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ihe ị na-achọghị iCloud ka mmekọrịta ga-eme na iwepu ya si iCloud. Niile anyị na-aga ime ebe a bụ deactivate ncheta si iCloud anyị wee na ncheta ga-ehichapụ si iCloud nkesa.
Ihichapụ ncheta si iCloud nwere ike na-enweta site na isoro usoro ndị dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mepee nchọgharị weebụ gị na-aga www.icloud.com.
Nzọụkwụ 2: Pịnye gị Apple ID na paswọọdụ. Pịa na akụ nbanye.
Nzọụkwụ 3: Pịa na Nchetara n'etiti ndepụta nke égwu.
Nzọụkwụ 4: Pịa na obere okirikiri n'akuku ncheta ka ihichapụ ncheta.
Wondershare SafeEraser bụ ihe ngwa e mere iji ehichapụkwa ọdịnaya na gị iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. Ọ kasị mma na-eji mgbe ị chọrọ inye ma ọ bụ resell gị iPhone. The data ehichapu na SafeEraser na-na-adịgide adịgide ehichapụ na-apụghị weghachiri eweghachi n'agbanyeghị ihe.
Ọ nwere ike na-eji na-ọcha photos, videos, ndetu, okwuntughe, ncheta, kọntaktị, ozi na ndị ọzọ na onye data on iPhone. Ọ na-arụ ọrụ niile iOS ngwaọrụ na awade 3 ụdịdị maka nhicha data. A na-ejikwa ọcha enweghị isi junk faịlụ na ekwentị gị.
Iji hichapụ ihe ncheta gị iPhone iji Wondershare SafeEraser-eme dị ka ndị na-esonụ.
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare SafeEraser. Open SafeEraser na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa. Ugbu a, họrọ "ihichapu ehichapụ faịlụ".
SafeEraser ga-nyochaa ekwentị gị data nkeji ole na ole. Ọ ga-ahụ na-egosipụta na-ehichapụ data site na ekwentị gị n'ihi na ị na-adịgide adịgide ihichapu.
Nzọụkwụ 2: Họrọ "Kalinda, Nchetara" site uhuruchi checkbox n'akuku ya. Ugbu a, pịa ihichapu ka kpamkpam ihichapu ihe ncheta gị.
Nke a na-kasị mma na-eji mgbe onye nwe iPhone chọrọ na-ere na ekwentị. Ndị ọzọ data dị ka ozi, ndetu, wdg nwekwara ike-ehichapụ dị ka e gosiri na foto n'elu.
Ndị ọzọ na atụmatụ nke Wondershare SafeEraser
Ọ gbapụrụ ọsọ elu ekwentị gị site na nhicha junk site na ekwentị gị na enyemaka nke 1-click ọcha-elu ngwá ọrụ dị na software.
Ọ na-eji agha technology mgbe erasing faịlụ site na iPhone mere na ha nwere ike mgbe-natara.
Ọ na-nwere a foto Compressor na compresses foto gị site 75% onwe elu karịa ohere na gị iPhone.
Ọ nwere mfe ọrụ interface na ọ bịa ọsọ ọsọ kpere aga-eme bụ ngwa ngwa.
> Resource> iPhone>-adịgide adịgide Hichapụ Ncheta on iPhone na Wondershare SafeEraser